I-House of Character eneminyaka engu-333 ethokomele e-Xaghra
Itholakala edolobhaneni elihle laseXaghra/Gozo - okuyikhaya lezakhiwo zethempeli ezindala kunazo zonke emhlabeni - leli khaya elivuselelwe ngokucophelela futhi lavuselelwa, elakhiwa ngo-1688 njengoba ikhaya lompristi wesifunda likwamukela ngomlando walo ongapheli kanye nokuthakazelisa. . Uzojabulela zonke izinsiza zesimanje njengesamba esingu-4 A/C's, i-inthanethi esheshayo, amagumbi okugeza amasha nekhishi elinemishini ye-Bosch yezinga eliphezulu,... Indlu ilala abantu abangafika kwabayi-6 (4+2) emoyeni oku-3 ngokuphelele. amakamelo okulala anesimo.
+ 2 amakamelo okulala anomoya opholile ngokuphelele kanye nesifundo esinomoya ongalala abanye abantu abangu-2 kusofa othokomele nomusha wokulala
+ Ikhishi elisha, elihlome ngokuphelele elinezinto zikagesi ze-LIEBHERR ne-BOSCH nomshini wokuwasha izitsha
+ 2 amagumbi okugeza amasha, 1 x ishawa, 1x inhlanganisela yokugeza/ishawa.
+ Indawo yokuhlala/yokudlela ene-air-conditioner ngokugcwele nge-Samsung TV, i-DAB Radio nesiqandisi sewayini
+ 2 ovulandi nophahla olusha sha olunokubukwa kwethrekhi yomjaho wasolwandle namahhashi, usofa, imibhede yelanga kanye ne-BBQ yegesi
+ I-WiFi esheshayo, amasokhethi amaningi kagesi ane-USB
+ 11 amaphaneli e-PV akhiqizwa nsuku zonke cishe angama-20 KWh
+ 333 iminyaka yokungawakhi amafulethi esikhundleni salokho ;-)
Indlu itholakala endaweni enhle kakhulu! i-cul de sac ethule (izimoto ezi-4-5 ngosuku), izungezwe umphakathi wendawo onobungane kakhulu. Isikwele se-Xaghra esinemigoqo, izindawo zokudlela kanye nazo zonke izinhlobo zezitolo zezidingo zakho zansuku zonke sikuhambo lwemizuzu emi-3 kuphela futhi uphahla lunikeza ukubukwa okungakholakali kwethrekhi yomjaho wamahhashi i-Gozo, i-Comino ne-Malta. I-Xaghra futhi iyikhaya lezakhiwo zethempeli ezindala kunazo zonke emhlabeni jikelele, ezindala kakhulu kunemibhoshongo.
Ithimba lethu elinolwazi liyatholakala 24/7 ngawe uma kuziwa kumathiphu, amaqhinga nosekelo. Sizokwenza noma yini edingekayo ukwenza ukuhlala kwakho kube okuphelele!